xilli fasax halkan iyo halkan NetEnt ayaa talaabo dheeraad ah si ay u horumariyaan kulan oo ay oo ay siiyaan taabashada ah ee Christmas. Ku raaxayso Fruit Shop Christmas Edition at Coinfalls Casino Naadi Mobile UK, Afyare caan kaliya heshay fiican la edition this. ciyaarta booska ku salaysan xilli fasax uu leeyahay guul weyn dukaanka ciyaartoyda, sidaa darteed naftaada kicin iyo aad u hesho diyaar u ah inuu ku guuleysto qaar ka mid ah guul la yaab leh la booska this. Afyare The xiiso of dukaan Fruit ayaa la beddelay si qurux badan u keeno qaar ka mid ah guul cajiib ah ciyaartoyda.
Tani Naadi Mobile UK ciyaarta ayaa dhameystirtay la naqshadeynta tayo iyo qoreysa gameplay fudud, Halkan ka ciyaaryahan ee dhamaan noocyada ciyaari karo kulanka this Afyare oo xiiso leh. The midabo dhalaalaya iyo calaamadaha Christmas soo bandhigay on asalka hubin in ay sii ciyaaryahan marti qaaday oo ku hawlan. Waxaa jira wilds, fidiyana oo dheeraad ah ciyaartoyda inay ku raaxaystaan ​​la kulanka booska this. ka hor Tag oo wuxuu ku raaxaysan sifooyinka gaarka ah la this booska Kaapelitalo Christmas.
About sameeysa ee Fruit Shop Christmas Edition
sameeysa ee fantastic this Christmas Naadi Mobile UK waa NetEnt oo ay had iyo jeer lagu yaqaan for abuurka ah in ay shaqo kasta oo kulan casino ay. Waxay ka shaqeeyaan si ay u abuuraan ugu wanaagsan oo halkan ay leeyihiin badan oo raacsan.
More on saakay ka
Iyadoo size qadaadiic ah 0.01-2.00, ka xiiso Fruit Shop Christmas Edition leeyahay 5 duntu iyo 15 paylines. Waxaa dhiirigelintiisa lahaa xilli fasaxa, waxa xiiso ah Naadi Mobile UK in uu leeyahay calaamadaha qurux badan ciyaartoyda inay ku raaxaystaan. Waxa kale oo loo qoondeeyey, si loo waafajiyo niyadda ruuxa fasaxa iyo halkan ciyaartoyda ay awoodaan in ay ku raaxaystaan ​​quruxda Christmas la duntu of Afyare noqon doonaa.
button koror iyo hoos u dhac ayaa loo isticmaali karaa si uu u xaliyo size ee bet ah, iyo lacagta bet ilaa xad weyn ay go'aamiso lacagta kaga badiyeen, Halkan ka hubi in aad hagaajin size ee bet si caqli ah. logo dukaan Fruit waa dibadeed ee ciyaarta Afyare iyo halkan ka bedeli doona calaamado kale si ay u buuxiyaan isku guul iyo dhigeeysa free la keentay karaa Calaamooyinka miro kala duwan ee kulanka saldhig laftigeeda.
Fruit Shop Christmas Edition waa qurux a Naadi Mobile UK oo uu soo danbeeyay la muuqaalada cajiib ah. Midhaha iyo calaamadaha kala duwan ee kulanka Afyare leeyihiin guul cajiib ah ciyaartoyda si loo helo ee la wareejin kasta oo xaq u. ka hor Tag oo ayna miiqdaan ku duntu ka ciyaarta Afyare iyo ha nalalka of Christmas idin keeni qaar ka mid ah guul la yaab leh.